शुक्ला गण्डकी माविको महायज्ञ जारी - Samachar PatiSamachar Pati
शुक्ला गण्डकी माविको महायज्ञ जारी
श्रीभद्र पौडेल, १४ बैशाख । हेमजा, १३ बैशाख।कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३,घाचोक स्थित शुक्लागण्डकी माविमा मंगलवारदेखि सुरु विराट शैक्षिक श्रीमद्भागवत धन धान्याञ्चल महायज्ञ यतिवेला जारी रहेको छ । विद्यालयले प्राविधिक शिक्षालयको पुर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखेर महायज्ञ गरेको हो ।
महायज्ञको तेस्रो दिन बिहीवारसम्म नगद तथा भुमिदान गरी कुल रु. ३० लाख २९ हजार ७७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यज्ञमा बिहीवार सबैभन्दा बढी मुल आयोजक समितिका संयोजक रविलाल पोखरेलको परिवारबाट रु.तीन लाख ५१ हजार सहयोग प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी लामाचौर निवासी देउबहादुर गुरुङ (हेमकाजी) बाट रु. ५१ हजार एक सय ११, पोखरा १ निवासी मेषबहादुर गुरुङबाट रु. ५५ हजार पाँच सय ५५, लामाचौरका बाबुराम आचार्यबाट रु. २५ हजार, लामाचौरकै हेमप्रसाद गौतमबाट नगद रु. २० हजार, घाचोक निवासी पुर्णकली पोखरेलको परिवारबाट रु. एक लाख एक हजार एक सय ११ पनि यज्ञमा प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै घाचोक निवासी बुद्घिसागर पोखरेलको परिवारबाट रु. एक लाख एक सय एक, पोखरा–१, भिमकालीपाटन निवासी कुमारी गुरुङबाट रु. ५१ हजार एक सय पाँच, पोखरा–१, भिमकालीपाटन निवासी ओममाया गुरुङबाट रु. ५१ हजार एक सय १५ तथा घाचोक कतार सम्पर्क समितिबाट रु.४५ हजार आठ सय १४ पनि सहयोग भएको महायज्ञ सचिवालय व्यवस्थापन समितिका सचिव विष्णु भण्डारीले जानकारी दिए ।
महायज्ञमा बिहीवार भुमिदान पनि संकलन भएको छ । जसअनुसार घाचोक निवासी पूर्णकली पोखरेलको परिवारले ६ आना तीन पैसा भुमि दान गरेकी छन ।त्यस्तै घाचोकका उमनाथ पोखरेल र पार्वती पोखरेलबाट तुलादान पनि भएको मुल आयोजक समितिका संयोजक रविलाल पोखरेलले बताए ।सुरुको दिनको तुलनामा पछिल्ला दिनमा यज्ञमा भक्तजनको सहभागिता तथा दान उठ्ने क्रम समेत बढेर गएको छ ।
यज्ञमा भागवत भाष्कर युवा पण्डित कमलनयन गौतमले भागवत वाचन गरिरहेका छन ।उनले मानव जीवनमा श्रीमद्भागवतको ठुलो महिमा रहने औँल्याउँदै विद्या नै सबैभन्दा ठुलो धन भएको चर्चा गरे । यहि बैशाख १८ गतेसम्म चल्ने उक्त यज्ञबाट ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गुडिरहेको कारमा एक्कासी आगो लाग्दा कार जलेर नस्ट
फेसियल हाउसको आयोजनामा ‘फेशन ट्रेड सिजन टू’ सम्पन्न, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने पहिरनसम्म प्रस्तुत